ज्योति विकास बैंकले पायो सतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न अनुमति !
ARCHIVE, CORPORATE » ज्योति विकास बैंकले पायो सतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न अनुमति !
काठमाडौं - ज्योति विकास बैंकले सतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ ।बैंकले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १० करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजीमा १:१ अनुपातमा हकप्रद ल्याउन लागेको हो ।
लैमात्र तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको राप्ती भेरी विकास बैंकलाई एक्वाएर गर्ने सम्झौता गरेको बैंकले हकप्रद जारी पछि बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्ब २० करोड ८७ लाख पुग्ने छ । त्यसपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३७ करोड पुग्छ । केन्द्रीय बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजीको लागि हकप्रद एक्वाएरपछि १३ करोड अपुग हुन्छ । यो रकम यो वर्षको बोनसबाट सजिलै पुग्ने देखिन्छ ।